ႏႈတ္ခမ္းတစ္ဝိုက္ ''မွဲ႔''ပါတ့ဲသူ အမ်ားစုဟာ အရမ္းသနားစရာေကာင္းတယ္ - APANNPYAY
/ ႏႈတ္ခမ္းတစ္ဝိုက္ ''မွဲ႔''ပါတ့ဲသူ အမ်ားစုဟာ အရမ္းသနားစရာေကာင္းတယ္
ႏႈတ္ခမ္းတစ္ဝိုက္ ''မွဲ႔''ပါတ့ဲသူ အမ်ားစုဟာ အရမ္းသနားစရာေကာင္းတယ္
နဳတ္ခမ္းတစ္ဝိုက္ ''မွဲ႔''ပါတ့ဲသူ အမ်ားစုဟာသနားစရာ၊
အလြန္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ပါတယ္?🔮🔮 ပြစိပြစိလုပ္တာကေတာ့ ဝါသနာပါ :-p
နဳတ္ခမ္းတစ္ဝိုက္ ''မွဲ႔''ပါတ့ဲသူေတြဟာ ေစတနာလည္းအရမ္းေကာင္းသလိုသံေယာဇဥ္လည္းအလြန္ႀကီးၾကတဲ့သူေတြပါ။🎆သူတို႔ဟာစိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္လည္းလြယ္ပါတယ္။ခဏခဏလည္းစိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္တတ္ပါတယ္😩😫စိတ္ေကာက္လည္းခဏပဲ။ ေခ်ာ့မယ့္သူ႐ွိရင္ေတာ့ဟန္အမူပိုၿပီးဆက္ၿပီးေတာ့စိတ္ေကာက္ဟန္...ေဆာင္ေနတတ္ပါတယ္။ေခ်ာ့မယ့္သူမ႐ွိရင္ေတာ့သူ႔အလိုလိုေပ်ာ့သြားေရာ😂😂📹📷📹📷
နဳတ္ခမ္းတစ္ဝိုက္ ''မွဲ႔''ပါတ့ဲသူေတြဟာအမ်ားအားျဖင့္ကိုယ့္ ဘဝကို📏📐စိတ္ညစ္စရာေကာင္းတယ္လို႔ထင္ေနတတ္ပါတယ္။သူမ်ားအၾကည့္ေတြကိုလည္း
သူမ်ားစကားကိုယံုၿပီးလက္ခံတတ္တဲ့အတြက္ အလုပ္တစ္ခုကိုလုပ္မယ္ဆိုရင္လည္းစဥ္းစားေနတာနဲ႔ပဲအခ်နိ္ကုန္သြားတတ္တယ္။@}-;-'-- @}-;-'-လုပ္လိုက္တဲ့ကိစၥတစ္ခုကို အမ်ားအားျဖင့္ျပႆသ၁နာျဖစ္မယ္🎻🎺🎷၊ဆံုး႐ႈးံမယ္ဆိုၿပီးမေကာင္းတဲ့ဘက္ကပဲ အမ်ားအားျဖင့္ ေတြးေလ့႐ွိတယ္။🏀⚽🏀
နဳတ္ခမ္းတစ္ဝိုက္ ''မွဲ႔''ပါတ့ဲသူေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကိုျမတ္ႏိုးသူေတြပါ။🍭🍭ျဖစ္ႏိုင္ရင္ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းပဲ
ေတာင္းပန္ရမွာကိုေတာ့ ေသေလာက္ေအာင္မုန္းတယ္။သူအမွားတစ္ခုလုပ္မိၿပီဆိုရင္လည္းေနာင္တရမဆံုးျဖစ္ေနတတ္တာနဳတ္ခမ္းတစ္ဝိုက္ ''မွဲ႔''ပါတ့ဲသူေတြပါ♕ ♕ ❆
နဳတ္ခမ္းတစ္ဝိုက္''မွဲ႔''ပါတ့ဲသူေတြကိုခ်စ္သူခင္သူလည္းေပါသလို❦ ❦ အေပါင္းအသင္းလည္းမ်ားေပမယ့္ ....အမ်ားအားျဖင့္တစ္ေယာက္တည္းေနရတာကိုပဲ...သေဘာက်ၿပီးတစ္ေယာက္တည္းပဲဖစ္ေနတတ္ပါတယ္🍑🍑👲👳👲👳
နဳတ္ခမ္းတစ္ဝိုက္ ''မွဲ႔''ပါတ့ဲသူေတြ ကေဒါသကလည္းအရမ္းႀကီးတတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ေတာ္႐ုံတန္႐ုံစိတ္မဆိုးတတ္ပါဘူး။☺☺စိတ္ကလည္းအရမ္းျမန္တယ္။ သူမွန္တယ္ထင္ရင္ဘယ္သူ႔ကိုမဆို ရင္ဆိုင္ရဲတယ္။
ဘာမဆိုလုပ္ရဲတယ္။ ကိစၥတစ္ခုကိုလုပ္ခ်င္ၿပီဆိုရင္လည္းဇြတ္လုပ္တတ္တယ္။😄😃သူ႔ကိုမခံခ်င္ေအာင္၊...ေဒါသထြက္ေအာင္မထိတထိသြားလုပ္တဲ့သူေတြဆို ...အရြဲ႔ျပန္တိုက္ရ္မွကိုေက်နပ္တယ္။
နဳတ္ခမ္းတစ္ဝိုက္''မွဲ႔''ပါတ့ဲသူေတြဟာခ်စ္သူအေပၚမွာလည္း....ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ကူးထက္ခ်စ္သူရဲ႕ စိတ္ကူးကိုပိုၿပီးဦးစားေပးတတ္ၾကပါတယ္။ 😍😍😍ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူကိုလည္းလိုတာထက္ပိုၿပီးေတာ့သဝန္တိုတတ္ၾကတယ္။
နဳတ္ခမ္းတစ္ဝိုက္''မွဲ႔''ပါတ့ဲသူေတြဟာတစ္ေယာက္ဆိုတစ္ေယာက္ပိေတာက္ဆိုပိေတာက္ပါပဲ္??????ဘူးဆိုဖ႐ုံမသီးတတ္ပါဘူး😎😎စိတ္ခံစားမႈကလည္းအရမ္းျပင္းထန္တဲ့အတြက္ ခ်စ္သူနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးဘာမဟုတ္တာေလးကအစ စိတ္ထဲမွာဝမ္းနည္းခံစားတတ္ပါတယ္။😩😫
Make Up Shwe Thwe
နုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ''မှဲ့''ပါတဲ့သူ အများစုဟာသနားစရာ၊
အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပါတယ်?🔮🔮 ပွစိပွစိလုပ်တာကတော့ ဝါသနာပါ :-p
ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်ကူညီလိုက်တဲ့သူအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင် ကြည်နူးပီတိဖြစ်နေတတ်တဲ့သူတွေပါ📲🔈🔉
နုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ''မှဲ့''ပါတဲ့သူတွေဟာ စေတနာလည်းအရမ်းကောင်းသလိုသံယောဇဉ်လည်းအလွန်ကြီးကြတဲ့သူတွေပါ။🎆သူတို့ဟာစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်လည်းလွယ်ပါတယ်။ခဏခဏလည်းစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တတ်ပါတယ်😩😫စိတ်ကောက်လည်းခဏပဲ။ ချော့မယ့်သူရှိရင်တော့ဟန်အမူပိုပြီးဆက်ပြီးတော့စိတ်ကောက်ဟန်...ဆောင်နေတတ်ပါတယ်။ချော့မယ့်သူမရှိရင်တော့သူ့အလိုလိုပျော့သွားရော😂😂📹📷📹📷
ဖြစ်ခဲ့သမျှ အတိတ်တွေကိုတော့ အမြဲမမေ့ဖျောက်နိုင်ပဲ အမှတ်ကြီးတဲ့သူတွေပါ။✂✂✂📂📁
နုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ''မှဲ့''ပါတဲ့သူတွေဟာအများအားဖြင့်ကိုယ့် ဘဝကို📏📐စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်နေတတ်ပါတယ်။သူများအကြည့်တွေကိုလည်း
သူများစကားကိုယုံပြီးလက်ခံတတ်တဲ့အတွက် အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းစဉ်းစားနေတာနဲ့ပဲအချနိ်ကုန်သွားတတ်တယ်။@}-;-'-- @}-;-'-လုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို အများအားဖြင့်ပြဿသ၁နာဖြစ်မယ်🎻🎺🎷၊ဆုံးရှုးံမယ်ဆိုပြီးမကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲ အများအားဖြင့် တွေးလေ့ရှိတယ်။🏀⚽🏀
နုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ''မှဲ့''ပါတဲ့သူတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုမြတ်နိုးသူတွေပါ။🍭🍭ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပဲ
တောင်းပန်ရမှာကိုတော့ သေလောက်အောင်မုန်းတယ်။သူအမှားတစ်ခုလုပ်မိပြီဆိုရင်လည်းနောင်တရမဆုံးဖြစ်နေတတ်တာနုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ''မှဲ့''ပါတဲ့သူတွေပါ♕ ♕ ❆
ဦးစားပေးတတ်တယ်။ ..❦ ❦ သနားတတ်တယ်။❦ ❦
အားနာတတ်တယ်။❦ ❦ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်မိသားစုအပေါ်မှာတော့အနိုင်ယူချင်တယ်။♨ ♨ ♨
နုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်''မှဲ့''ပါတဲ့သူတွေကိုချစ်သူခင်သူလည်းပေါသလို❦ ❦ အပေါင်းအသင်းလည်းများပေမယ့် ....အများအားဖြင့်တစ်ယောက်တည်းနေရတာကိုပဲ...သဘောကျပြီးတစ်ယောက်တည်းပဲဖစ်နေတတ်ပါတယ်🍑🍑👲👳👲👳
နုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ''မှဲ့''ပါတဲ့သူတွေ ကဒေါသကလည်းအရမ်းကြီးတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့်တော်ရုံတန်ရုံစိတ်မဆိုးတတ်ပါဘူး။☺☺စိတ်ကလည်းအရမ်းမြန်တယ်။ သူမှန်တယ်ထင်ရင်ဘယ်သူ့ကိုမဆို ရင်ဆိုင်ရဲတယ်။
ဘာမဆိုလုပ်ရဲတယ်။ ကိစ္စတစ်ခုကိုလုပ်ချင်ပြီဆိုရင်လည်းဇွတ်လုပ်တတ်တယ်။😄😃သူ့ကိုမခံချင်အောင်၊...ဒေါသထွက်အောင်မထိတထိသွားလုပ်တဲ့သူတွေဆို ...အရွဲ့ပြန်တိုက်ရ်မှကိုကျေနပ်တယ်။
စိတ်တိုနေပြီဆိုရင်တော့😠😠မျက်နှာထားကတင်းတင်းနဲ့ တစ်လောကလုံးသူ့လုပ်စာကိုပဲထိုင်စားနေရသလို 😡😡ဘယ်သူနဲ့မှကိုစကားမပြောချင်တော့ဘူး😷😷😷😷😷
နုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်''မှဲ့''ပါတဲ့သူတွေဟာချစ်သူအပေါ်မှာလည်း....ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထက်ချစ်သူရဲ့ စိတ်ကူးကိုပိုပြီးဦးစားပေးတတ်ကြပါတယ်။ 😍😍😍ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုလည်းလိုတာထက်ပိုပြီးတော့သဝန်တိုတတ်ကြတယ်။
ပြီးတော့စိ်ထဲမှာရှိတာိကုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမပြောရဲကြဘူး➳ ➳ ➳
မြတ်နိုးသလောက် ဂရုစိုက်သလောက် ကြင်နာ သလောက် တွယ်တာသလောက် အလေးထားသလောက် နားလည်မှု တွေခွင့်လွှတ်မှုတွေရှိသလောက်
နုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်''မှဲ့''ပါတဲ့သူတွေဟာတစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်ပိတောက်ဆိုပိတောက်ပါပဲ်??????ဘူးဆိုဖရုံမသီးတတ်ပါဘူး😎😎စိတ်ခံစားမှုကလည်းအရမ်းပြင်းထန်တဲ့အတွက် ချစ်သူနဲ့ပတ်သတ်ပြီးဘာမဟုတ်တာလေးကအစ စိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းခံစားတတ်ပါတယ်။😩😫